Warshadda gawaarida qalooca Shiinaha iyo soosaarayaasha | Yuantuo
Gawaarida qalooca waxay la kulmi karaan shuruudaha gaadiidka safka kaliya ee calaamadeynta cabitaanka, buuxinta, nadiifinta iyo qalabka kale, sidoo kale safaf keli ah ayey ka dhigi karaan safaf badan waxayna si tartiib ah u socon karaan, si ay u soo saaraan awooda keydinta oo ay u buuxiyaan shuruudaha quudinta ballaaran ee jeermiska, madal lagu keydiyo dhalada iyo mashiinka dhalada qabow. Waxaan ka dhigi karnaa madaxa iyo dabada laba silsiladood oo xambaarsan silsilad isku dhafan oo is dul saaran, si dhalada (awooddu) jirku ugu jiro xaalad firfircoon Waxay ku qancin kartaa cadaadiska iyo gaadiidka aan cadaadiska lahayn ee dhalada faaruqda ah iyo dhalada adag.
Baaxadda arjiga ee qaade qalooca: waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa gudbinta otomaatigga ah iyo qaybinta cuntada, cuntada qasacadaysan, daawada, cabitaanka, qurxinta iyo alaabada lagu dhaqo, alaabada waraaqaha, kuwa udgoon, caanaha iyo tubaakada, iwm, iyo sidoo kale gudbinta khadka tooska ah ee baakadaha gadaal.
Waxay ku habboon tahay daabulidda dhammaan noocyada sanaadiiqda, bacaha, boodhadhka, iwm. Maaddooyinka waaweyn, maqaallada yaryar ama maqaallada aan caadiga ahayn waxay u baahan yihiin in lagu qaado santuuqyada ama sanaadiiqda wareejinta. Waxay qaadi kartaa hal shey oo culus ama waxay qaadi kartaa culeys weyn oo saameyn ah. Way fududahay in la isku xiro oo la shaandheeyo khadadka durbaannada. Waxay abuuri kartaa nidaam gaadiid saad adag oo wata khadad farabadan oo durbaanno ah iyo gaadiidley kale ama mashiinno gaar ah si loo buuxiyo shuruudaha geeddi-socodka kala duwan. Rullaluistemadka is-dulsaarida ayaa loo isticmaali karaa in lagu xaqiijiyo isku-xoqidda iyo gudbinta qalabka. Wadada gawaarida waxay leedahay faa'iidooyinka qaabdhismeedka fudud, kalsoonida sare iyo dayactirka habboon.
Gaarigu waa xasiloon yahay, maaddada iyo suunka xambaarayaasha ma laha dhaqdhaqaaq qaraabo ah, oo ka fogaan kara dhaawaca soo gaara alaabada. Sawaxan hoose, oo ku habboon jawiga shaqada ee deggan. Qaab dhismeedku waa mid fudud oo fudud in la ilaaliyo. Isticmaal tamar yar iyo qiimo jaban. Waxay ku habboon tahay wax soo saarka cuntada iyo warshadaha wax soo saarka, sida khadka soo-saarka keega, khadka wax soo saarka dhibcaha, khadka wax soo saarka cunnada fudud ee barafoobay, gaadiidka cuntada la soo baakadeeyay, keydinta cuntada iyo gaadiidka saadka, iwm.
Hore: Wareejinta silsiladda
Xiga: Wareejiyaha suunka qalooca
Sariirta wasakhda ah
Nidaamka Gawaarida Gawaarida